Mootummaan Naannoo Oromiyaa muudama haaromsaa eeglame cimsa jedhe taasise - BBC News Afaan Oromoo
18 Ebla 2018
Madda suuraa, Oromia Communicatioon Bureau
Yaa'ii Caffee Oromiyaarratti
Mootummaan Naannoo Oromiyaa muudama gara garaa sochii haaromsaa eeglame ciminaan itti fufsiisa jedhame taasise.
Tarreeffama muudama fuula facebook kan Waajira Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irratti ba'e akka agrsiisutti muudamni kun gaggeessitoota sadrkaa mootummaa naannoofi federaalaatti walitti fiduun kan gurmaa'edha.
Isaanis dandeettii raawwachiisummaa mootummaa cimsuudhaan rakkoo bulchiinsa gaariifi kenniinsa tajaajilaa hiikuu, sadarkaa federaalaatti gahee hoggansaa qabnu gahumsa ol'aanaadhaan bahachuuf hoggansa Mootummaa Federalaatiif gumaachuufi hirmaannaa dubartootni, dargaggootniifi hayyootni hoggansa keessati qaban cimsuudha.
Torban darbes Caffeen Oromiyaa Yaa'ii Idileesaatiin raawwii hojii erga gamagamee booda kan Mana Murtii Ol Anaa Oromiyaafi OBN dabalatee muudama gara garaa kennuun isaa ni yaadatama.
Firaansitti namootni sadii haleellaa haaduun ajjeefaman